भुवन दाइ पनि निर्माता हुँदा मलाई मात्र किन थुनियो ? – Mero Film
भुवन दाइ पनि निर्माता हुँदा मलाई मात्र किन थुनियो ?
फिल्म ‘कृ’का निर्मातामध्येका एक सुवास गिरीले आफूलाई फिल्मको गीत ‘उकालीमा अघि अघि’ मामलामा निर्देशक शम्भु प्रधानले बार्गेनिङ गरेर हिरासतमा राखेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो फिल्म ‘सम्झना’को गीत ‘उकालीमा अघि अघि’को गीत विना अनुमति भुवन केसीको फिल्ममा राखिएको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
२०७४ चैत १५ गते १३:३७ मा प्रकाशित